China Jack, kwụ Jack, vetikal jaak, haịdrọlik na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na-emepụta | Boda
A na-ejikarị Jack eme ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, mines, njem na ngalaba ndị ọzọ dịka nrụzi ụgbọala na mbuli ndị ọzọ, na-akwado yana ọrụ ndị ọzọ. Ọdịdị ahụ dị ọkụ, sie ike, na-agbanwe agbanwe ma bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi, ọ nwere ike iburu ma rụọ ọrụ site n'aka otu onye.
Jack bụ akụrụngwa kachasị dị elu na obere ibuli elu (ihe na-erughị 1m). Ọ nwere ụdị abụọ: igwe na hydraulic. Igwe igwe nwere ụdị ogbe na ịghasa. N'ihi ikike ibuli obere ọrụ ya na ịrụsi ọrụ ike ya, a na-ejikarị ya arụzi ọrụ ma ọ gaghị adabara ndozi mmiri. Hydraulic jack nwere kọmpat Ọdịdị, anụ ọrụ na-ejide onwe ọrụ, ya mere, ọtụtụ-eji. Ya ọghọm bụ na eweli elu ejedebeghị na eweli ọsọ bụ ngwa ngwa.
Dabere na ụkpụrụ nrụpụta dị iche iche, enwere jacks na-arụ ọrụ na hydraulic jacks. Principleskpụrụ dị iche. Na ụkpụrụ, usoro kachasị mkpa nke nnyefe hydraulic bụ ụkpụrụ Pascal, ya bụ, nrụgide nke mmiri mmiri bụ otu ebe niile. N'ime usoro ziri ezi, nrụgide a na-etinye na obere piston pere mpe karịa nke ahụ na nnukwu piston Ike ahụ bukwara ibu, nke na-eme ka mmiri mmiri ahụ dịrị.
Ya mere, site na nnyefe nke mmiri mmiri, anyị nwere ike ịnweta nrụgide dị iche na nsọtụ dị iche iche, ka anyị wee nwee ike nweta nzube nke mgbanwe. Ngwunye hydraulic anyị anyị na-ejikarị bụ iji ụkpụrụ a mee ihe iji nweta ike. Mechanicalkpụrụ nke nkedo a na-atụgharị bụ ịdọpụ aka ahụ na azụ, dọpụta mboanuohia iji mee ka mkpochapụ ratchet gbanwee.
Obere bevel gia na-eme ka nnukwu akwa bevel na-eme ka ihe na-ebuli elu na-agbagharị, ka e wee nwee ike ibuli ma ọ bụ wedata uwe aka
iji nweta ọrụ nke ibuli esemokwu. Ma ọ bụghị dị mfe dị ka jaịdrọlik.
Ihe dị iche n'etiti nkedo kwụ na jaket vetikal bụ: ọ dị mfe ịrụ ọrụ, ikike ibuli elu nke jack kwụ ọtọ, dabara adaba maka nnukwu ụgbọ ala. Jack vetikal dị mfe iji rụọ ọrụ ma dabara adaba maka trolley.
Vetikal Jack: n'iji hydraulic ụkpụrụ, dị iche na ọdịnala igwe na-arụ ọrụ, ọ bụ ngwongwo na-ebugharị ụgbọala na arụmọrụ dị mfe, nchekwa, ntụkwasị obi, nchekwa ọrụ na ego siri ike.
Taa, ọ bụrụhaala na ebe a na-adọba ụgbọala ma ọ bụ ebe a na-adọba ụgbọala, ị nwere ike ịhụ kreenu hydraulic, jiri ya mee ihe ike nke nwatakịrị nwere ike ibuli ụgbọ ala.
BOSENDA ọnọde a usoro nke jaak maka esenidụt ahịa, anyị nwere ike ime OEM na ODM, maka ozi ndị ọzọ, na-eche free ịkpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: Hot gbazee egbe egbe, electric ígwè mama egbe, na-ekpo ọkụ ikuku egbe, plastic ịgbado ọkụ egbe, tin absorber
Mkpịsị ụkwụ Hydraulic